सिंहदरबारका पाँच सय २१ कर्मचारीमाथी छड्के अनुगमन, हाेला त कारबाही ! - Everest Dainik - News from Nepal
सिंहदरबारका पाँच सय २१ कर्मचारीमाथी छड्के अनुगमन, हाेला त कारबाही !
काठमाडौं, कात्तिक १८ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तोकिएको पोसाक नलगाउने र समयमा कार्यालय नआउने पाँच सय २१ कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
सतर्कताले सिंहदरबारभित्र बिहीबार छड्के निरीक्षण गर्दा सहसचिव, उपसचिव र अन्य विभिन्न तहका पाँच सय २१ कर्मचारीले कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने समय र लगाउनुपर्ने पोसाक प्रयोग नगरेको पाइएको थियो । सतर्कताले कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस देशको मुख्य प्रशासनिक भवनकै बिजोग